तनाव सधैं प्रबन्ध गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ तर के तपाईंलाई थाहा छ बिरालो पक्कै पनि यसको शोक गर्न सक्छ। - टेली रिले
तनाव सधैं प्रबन्ध गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ तर के तपाईंलाई थाहा छ बिरालो पक्कै पनि यसको शोक गर्न सक्छ?
शुद्ध स्वास्थ्यराम्रो बानीहरू
By bryanekobe On जुल 3, 2020
तनाव सधैं प्रबन्ध गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ तर के तपाईंलाई थाहा छ बिरालो पक्कै पनि यसको शोक गर्न सक्छ। Trendy कसरी वर्णन गर्दछ!
प्रेम बलहरू! यदि तपाईं जनावरहरू संग हुर्केको छ भने तपाईंलाई थाहा छ कि पशु एक शर्त प्रेमको स्रोत हो। मनमोहक हुनुको अलावा, तिनीहरू सँधै खेल सत्रको लागि तयार हुन्छन् र तपाईं उनीहरूसँग कहिले पनि बोर नहुने निश्चित हुनुहुन्छ। जनावर पाउनु जीवनभर बाँच्नको लागि चार खुट्टे साथीको लागि भाग्यशाली हो। यसैले तपाईंले एउटा हुनु अघि सावधानीपूर्वक सोच्नु पर्छ। वास्तवमा, फ्रान्स ड्रपआउटको सम्बन्धमा नम्बर १ देश हो र यो गौरवशाली छैन। हामी यो नबिर्सौं कि यी जीवित प्राणीहरू हुन् र तिनीहरू हाम्रो विचार, हाम्रो सम्मान र सबै प्रेमको योग्य छन्। विशेष गरी किनभने ती कहिलेकाँही हाम्रो चिन्ता कम गर्न सक्छन्। किनकि यदि त्यहाँ कुनै चिन्ताको हमलाको क्रममा चीजहरूलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्ने टेक्निकहरू छन् भने पनि, जान्नुहोस् कि बिरालोले तपाईंलाई दु: ख दिन पनि मद्दत गर्न सक्छ। Trendy कसरी वर्णन गर्दछ!
तपाईंलाई सायद यो थाँहा छ, तर बिरालासँग यो अचम्मको क्षमता छ। यदि ऊ खुशी छ भने उसले सफा गर्छ भने, तनाव वा बिरामी पर्दा पनि उसले पूरुर गर्न सक्दछ। यी क्षणहरूमा, यो एक आत्म-रक्षा तकनीक हो कि उसलाई आफैलाई आश्वासन दिन अनुमति दिन्छ। र टुलूसमा आधारित पशु चिकित्सकका अनुसार, त्यहाँ प्युरिंग थेरापी छ: “चोटपटक वा फ्र्याक्चर पछि, कुकुरहरू भन्दा बिरालाहरू पछि पाँच गुणा कम प्रभाव हुन्छन्, र तीन गुणा छिटो आकार फिर्ता फिर्ता आउँदछन्। तसर्थ, purring को एक प्रामाणिक उपचारात्मक कार्यको परिकल्पना: यो ध्वनी उत्सर्जन गरेर, बिरालाहरू खतरनाक परिस्थितिहरूमा बढी प्रतिरोधी हुन्छन्। "
तर यो सबै होइन, यो purring पनि आफ्नो मालिक शान्त थियो। यसले जीन-यवेस गौचेट वर्णन गरेझैं यसले साँचो सान्त्वनाको भावना जगाउँछ। “यो नरम आवाज सुन्दा हाम्रो निद्राको गुणस्तर र हाम्रो मुडमा संलग्न सेरोटोनिन, खुशीको हार्मोनको उत्पादन हुन्छ। "
डबल चिनबाट छुटकारा पाउन व्यावहारिक प्रविधि
संयुक्त राज्यमा, गैरसरकारी संस्थाले गुप्त उल्लlations्घनको निन्दा गर्दछ ...
तर स्पष्ट छ, purrs मात्र हाम्रो भलाईको लागि जिम्मेवार छैन। हाम्रो टोम्याकटको साथ हाम्रो शारीरिक सम्पर्कहरू पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ। हाम्रो तनाव, वास्तवमा, हामी तिनीहरूलाई मद्दत गर्ने बित्तिकै कम हुनेछ किनभने यो हामी उनीहरूसँग भएको सम्बन्धलाई कायम राख्छौं। यो हाम्रो चिन्तालाई कम हुँदै जान्छ कि तिनीहरू त्यहाँ छन्, कि तिनीहरूले हामीलाई माया गर्छन् र ती हामीलाई छोड्दैनन्।
अन्तमा, बिरालो पनि एक धेरै छैठौं अर्थ छ। तसर्थ, तिनीहरूले हाम्रो भावनाहरू पत्ता लगाउन सक्षम छन्। यदि हामी रुन्छौं, हाम्रो बिरालो हाम्रो छेउछाउमा जान्छ र हामी बिरामी छौं भने, यो नजिक आउनेछ। तर उसलाई कसरी थाहा हुन्छ कि हामीसँग समस्या छ? किनभने टोमकाट वास्तविक भावनात्मक स्पन्ज हो!
यसैले, हामी उत्सर्जन गरिरहेका फेरोमेन्सलाई धन्यवाद, यसले तिनीहरूलाई पहिचान गर्न सक्दछ किनकि प्रत्येक भावनाहरूको आफ्नै गन्ध हुन्छ। भन्नको लागि पर्याप्त छ कि यसको आरामदायक उपस्थिति धेरै उपयोगी हुन सक्छ जब हामीमा ढिलो छ। त्यसोभए बिराला अपनाउने राम्रो कारणहरू यी हुन् यदि तपाईंले राम्ररी बाधा र बजेटको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो भने यो प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसै बीचमा, कुन जनावरमा तपाईं पुनर्जन्म गर्न सक्नुहुनेछ भनेर फेला पार्नुहोस्।
यो लेख पहिलो पटक देखा पर्‍यो: https://trendy.letudiant.fr/psycho-voici-pourquoi-avoir-un-chat-permet-d-apaiser-le-stress-a4883.html
तनाव सधैं प्रबन्ध गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ तर के तपाईंलाई थाहा छ बिरालो पक्कै पनि यसको शोक गर्न सक्छ।
आरएफआईमा ओलिभियर बिबु निसाक: "आपसी सम्झौताको मुद्दामा हामीले ध्यान दियौं कि शासनमा गिरावट आएको छ"।
रोमान्टिक सम्बन्धमा सन्देशहरूको दबाबबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्
संयुक्त राज्यमा, गैरसरकारी संस्थाले गर्भाशय को गुप्त हटाउने खण्डन ...
बर्नार्ड तापी: उनको क्यान्सरसँग लड्न कटिबद्ध!